လက်ရှိပြည်တွင်း ပြောင်းဈေးကွက် အခြေအနေ၊ အလားအလာ၊ အခက်အခဲများနှင့် ပတ်သတ်ပြီး တွေ့ ဆုံမေးမြန်းမှု
တောင်သူလယ်သမား အထောက်အကူပြုအဖွဲ့ (၁) ဥက္ကဌ ဦးတိုးတက်နိုင်
လက်ရှိ မြန်မာ့ပြောင်းသီးနှံကို တရုတ်နိုင်ငံက အ၀ယ်နည်းသွားတာကြောင့် ပြည်တွင်း ပြောင်းဈေးကွက်အတွင်း မှာ ဈေးနှုန်းကျဆင်းပြီး၊ ပြောင်းစိုက်တောင်သူတွေ အခက်ကြုံနေရတဲ့ ခြေအနေပါ။ဒီအခြေအနေတွေကြောင့် လာမယ့်အနာဂတ် ပြောင်းဈေးကွက် အလားအလာအတွက် အစိုးရပိုင်းက ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးသင့်တဲ့ အ ချက်တွေကို တောင်သူနဲ့ ကုန်သည်ပွဲစား အသင်းအဖွဲ့များက စုစည်းပြီး အမျိုးသားလွှတ်တော် တောင်သူလယ်သ မားရေးရာနဲ့ ကျေးလက်နေပြည်သူများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ ကနေတစ်ဆင့် အစိုးရကို တင်ပြသွားမယ် လို့ သိရပါတယ်။
ဒါနဲ့ ပက်သက်ပြီး တောင်သူလယ်သမား အထောက်အကူပြုအဖွဲ့ (၁) ဥက္ကဌ ဦးတိုးတက်နိုင်ကို AMIA- Farmer Digital TV ရဲ့ သတင်းထောက် မစိုးချစ်ချစ်ပိုင်က သွားရောက်မေးမြန်းထားချက်များကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
မေး။ ။ ပြောင်းကဏ္ဍနဲ့ ပက်သက်ပြီး အမျိုးသားလွှတ်တော် တောင်သူလယ်သမားရေးရာနဲ့ ကျေးလက် နေပြည်သူများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီကို တင်ပြသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဘယ်လိုအချက်တွေ ပါဝင်မှာ ပါလဲ။
ဖြေ။ ။ နံပါတ်(၁)ကတော့ စိုက်ပျိုးချိန်မှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခက်အခဲတွေပေါ့။ မျိုးပြဿနာတို့၊ မြေသြ ဇာ၊ မြေ၊ ပြဿနာတို့ စသည်ဖြင့်ပါ။ နံပါတ်(၂) ကတော့ ရရှိလာတဲ့ ဈေးကွက်ကို ဘယ်လိုခိုင်မာအောင် တည် ဆောက်မလဲ၊ ဥပမာ တရုတ်သွားမှာလား၊ အိန္ဒိယသွားမှာလား၊ ထိုင်းသွားမှာက ပြည်တွင်း အစာစက်ရုံလား စသဖြင့်ပေါ့။ နံပါတ်(၃) ကတော ပြည်တွင်းမှာ ကုန်ချောထုတ်ဖို့ ကိစ္စပေါ့၊ ကျွန်တော်တို့ ဘယ်မှမရောင်းတော့ ဘူး။ ပြည်တွင်း အစာချက်စက်ရုံတွေက ထုတ်လုပ်တာရဲ့ ၅ ရာခိုင်နှုန်းပဲ ရှိသေးတယ်လေ။ ပြည်တွင်းမှာ ၅ ရာခိုင်နှုန်းပဲ ဖြုန်းနိုင်သေးတာပေါ့။ ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းက ပြည်ပကို အားကိုးနေရတဲ့ အခြေအနေ။ အဲတော့ ကျွန် တော်တို့က ၉၅ ကို ပြည်တွင်းမှာ ကုန်ချောအဖြစ် ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့၊ တစ်ခြားနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု ဖိတ်ခေါ်မလား ပေါ့။ ဒါတွေကို ကျွန်တော်တို့က တင်ပြရုံပါပဲ။ လုပ်ပေးရမှာက အစိုးရတာဝန်ပေါ့။
မေး။ ။ ပြည်ပတင်ပို့မှုမှာ ပြောင်းကို တရုတ်နိုင်ငံကိုပဲ အားထားတင်ပို့နေရတယ်လို့ သိရတယ်။ တစ် ခြားနိုင်ငံ ဈေးကွက်တွေကို ချဲ့ထွင်နိုင်ဖို့ ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေ ရှိနေလဲ။
ဖြေ။ ။ ရာခိုင်နှုန်း ၇၀ ကျော်က တရုတ်ဈေးကွက် တစ်ခုတည်းကို သွားနေတာ။ တစ်ခြားနိုင်ငံတွေကို သွားလို့တော့ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနဲ့ ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဌာနကနေ ပြောင်းနဲ့ ပက်သက်တဲ့ နည်းပညာကို အပြည့်အ၀မပေးတဲ့အတွက်ကြောင့် အရည်အသွေးပိုင်းဆိုင်ရာတွေ၊ ပြဿနာရှိနေတော့ တစ် ခြားနိုင်ငံတွေကို သွားလို့အဆင်မပြေဘူး။ အခုလောလောဆယ်ကတော့ ပြောင်းစစိုက်ကတည်းကနေ အခုချိန် အထိ မှောင်ခိုဈေးကွက်နဲ့ တရုတ်ကိုဝင်နေရတယ်။ တရုတ်ကလဲ ဒီမှောင်ခိုဈေးကွက်ကို ပိတ်သိမ်းမယ်ဆို တော့ ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်လပိုင်းကနေစပြီး၊ ယနေ့အချိန်ထိ အဆင်မပြေဘူးပေါ့ဗျာ။ အခုဆိုရင် ပိုကြပ်လာ တာပေါ့။ တရုတ်ခေါင်းစဉ်ကတော့ မှောင်ခိုဈေးကွက် တိုက်ဖျက်ရေးပေါ့။ အဓိကကတော့ တရားဝင်ဈေးကွက် ကို မရရှိသေးဘူး။
မေး။ ။ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ တရားဝင်ဈေးကွက်ကို တင်ပို့ခွင့်ရရှိဖို့အတွက် အဓိကရှိနေတဲ့ အခက်အခဲတွေ က ဘာတွေဖြစ်မလဲ။
ဖြေ။ ။ ဘာကြောင့် တရားဝင်ဈေးကွက် မရရှိသေးလဲဆိုတော့ ပြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တရုတ်နဲ့က မြန် မာနိုင်ငံအစိုးရနဲ့ MOU ထိုးထားတာ မရှိဘူး။ မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် တရားဝင်သွားလို့ မရဘူး။ ဒီပြောင်းထဲ မှာပါဝင်တဲ့ တရုတ်ဘက်ကနေ ကန့်သတ်ချင်တဲ့ အချက်တွေ ၁၄ ချက်လောက်ရှိတယ်။ အဲအချက်တွေမှာ ကျွန်တော်တို့က တစ်ချက်မ မလွတ်ဘူး။ အဲအတွက် ဖြေလျှော့ပေးဖို့ပဲ အစိုးရက ပြောပေးရမှာပါ။ MOU ထိုး ဖို့ကိုဘာကြောင့်မို့ နောက်တွန့်နေကြတာလဲဆိုတော့ ဒီဘက်က လိုအပ်ချက်တွေ ကျွန်တော်ထင်တာတော့ ပြောင်းရဲ့မျိုးမှာ GMO မျိုးစိတ်တွေ ပါနေလို့ တရုတ်က ကန့်သတ်ထားတာ အဓိက အဲဒီအချက်ဖြစ်မယ်။ တ ရုတ်က နဂိုကတည်းက တရားဝင်ပေးမထားတော့ ထိန်းချုပ်ချင်တာပေါ့။
မေး။ ။ ဒီအချက်တွေ တင်ပြတဲ့အခါမှာ ဘယ်လိုပုံစံမျိုး တင်ပြသွားမလဲ။ ဘယ်အသင်းအဖွဲ့တွေ ပါမ လဲ။
ဖြေ။ ။ ခုလောလောဆယ် ကျွန်တော်တို့ ချိတ်ထားတာကတော့ သုံး၊ လေးဖွဲ့လောက် ရှိနေပြီ၊ မြစ်ကြီး နား ပြောင်းစိုက်ပျိုးရေး အသင်းတွေ၊ ကျွန်တော်တို့ တောင်သူလယ်သမား အထောက်အကူပြု အဖွဲ့တွေ၊ နောက်ပြီးတော့ မန္တလေး ကုန်စည်ဒိုင်ကလူတွေ၊ ကုန်သည်ပွဲစားတွေကအစ သူဒေသနဲ့ သူ၊ သူအခက်အခဲတွေ ကို တင်ပြကြမယ်။ ကျွန်တော်တို့ စကားကို နားထောင်ပြီးတော့ လွှတ်တော်ကို တင်ပြပေးမယ်ဆိုရင်တော့ အ ဆင်ပြေတာပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုမျိုးတင်ပြဖို့ ကြိုးစားပေါင်းလဲ မနည်းတော့ပါဘူး။ ဒီကိစ္စကို လစ်လျူရှုထား တဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာ ကြုံနေရတာ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်လောက်ကတည်းက ကျွန်တော်တို့ ကြိုးစားနေတာ။ ဒါပေ မယ့် ဘယ်သူ့ကိုပြောလို့ ပြောရမှန်း မသိဖြစ်နေတယ်။ ၀န်ကြီးဌာနတွေကလည်း ပြောရင် အရည်အသွေး မ ကောင်းလို့ဆိုပြီး ဘော်လီဘော ပုတ်နေကြတယ်။
မေး။ ။ တရုတ် အ၀ယ်ကဆက်ပြီး ရပ်ဆိုင်းနေမယ်ဆိုရင် လာမယ့်နှစ်အတွက် ပြည်တွင်း ပြောင်းဈေး ကွက် အခြေအနေတွေက ဘယ်လိုတွေ ဖြစ်လာနိုင်မလဲ။ ဘယ်လိုဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်သင့်တယ်လို့ ထင်လဲ။
ဖြေ။ ။ ဘယ်လိုဖြေရှင်းရင် အကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတော့ ကျွန်တော်ပြောတဲ့ နံပါတ်(၁) အချက်ဖြစ် တဲ့ မျိုးတွေကို သေချာစီစစ်ရမယ်။ ကန့်သတ်ရမယ်။ မျိုးထဲမှာပါဝင်တဲ့ ပိုးတို့ GMO တို့ကို အစိုးရဌာနက သေ ချာစီစစ်သင့်တယ်။ အဲဒီမျိုးတွေ ပြီးပြီဆိုရင် မသုံးသင့်တဲ့၊ သုံးသင့်တဲ့ စိုက်ပျိုးတဲ့ နည်းပညာ၊ မြေသြဇာ ဒီအရာ တွေကို လမ်းညွှန်ပေးဖို့လိုတယ်။ အဲဒါမှ အရည်အသွေး ပြည့်ဝတဲ့ ပြောင်းထွက်လာမှ တစ်ခြားနိုင်ငံတွေကို အ ရည်အသွေး သွားစစ်ဆေးမယ်ဆိုရင် အောင်မြင်မှ တစ်ခြားနိုင်ငံဈေးကွက်ကို စဉ်းစားလို့ ရမှာလေ။ ဒါမမဟုတ် ရင်တော့ အခုကျွန်တော်တို့က တရုတ်ကနေ ပေါချောင်ကောင်းနဲ့ ၀ယ်ပေးနေတယ်။ အခု ရောင်းနေတဲ့အနေ အထားက မှောင်ခိုဈေးကွက် ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် ပြောင်းရဲ့ အရည်အသွေးကို သေချာစိစစ်တာမျိုးတော့ မရှိသေးဘူး။ တရုတ်က ဈေးဖျက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် ပြည်တွင်းက အစာချက်စက်ရုံတွေကလည်း ဈေးနှိမ် ပြီး ၀ယ်နေကြတယ်။ အမှန်တော့ အဲလိုမဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့။ ပြည်တွင်းက အစာချက် စက်ရုံတွေကလည်း သင့် တင့်တဲ့ ဈေးနှုန်းနဲ့ ၀ယ်ပေးသင့်တာပေါ့။ အခု တရုတ်ဈေးကျတော့ သူတို့ကလည်း လိုက်ချပြီးဝယ်တဲ့ သဘော ပေါ့။
ဟုတ်ကဲ့ အခုလို ဖြေကြားပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ရှင့်။
ရန္ကုန်၊ မတ် ၁၅
လက်ရျွိမန္မာ့ျေပာင်းသီးနွံကို တရုတ္နိုင်ငံက အ၀ယ္နည်းသြားတာကြောင့်ျပည္တငြ်းျေပာင်းစေ်းကြက်အတြင်း မွာ စေ်းနှုန်းက်ဆင်းပြီး၊ျေပာင်းစိုက်တောင်သူတြေ အခက်ကြုံနေရတဲ့ျေခအေနပါ။ ဒီအျေခအေနေတြေကြာင့် လာမယ့်အနာဂတ်ျေပာင်းစေ်းကြက် အလားအလာအတြက် အစိုးရပိုင်းကျေဖရွင်းဆောင်ရြက်ပေးသင့်တဲ့ အ ခ်က်တြေကို တောင်သူနဲ့ ကုန်သည္ပြဲစား အသင်းအဖြဲ့မ်ားက စုစည်းပြီး အမ်ိုးသားလွှတ်တော် တောင်သူလယ်သ မားရေးရာနဲ့ ကေ်းလက်နျေပည်သူမ်ား ဖြံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးက္မောတီ ကေနတစ္ဆင့် အစိုးရကို တင်ျပသြားမယ် လို့ သိရပါတယ်။
ဒါနဲ့ ပက်သက်ပြီး တောင်သူလယ်သမား အေထာက်အကျူပုအဖြဲ့ (၁) ဥက္ကဌ ဦးတိုးတက္နိုင္ကို AMIA- Farmer Digital TV ရဲ့ သတင်းထောက် မစိုးခ်စ္ခ်စ္ပိုင္က သြားရောက်မေျးမန်းထားခ်က္မ်ားကို ဖော်ျပေပးလိုက္ပါတယ်။
မေး။ ။ျေပာင်းကဏ္ဍနဲ့ ပက်သက်ပြီး အမ်ိုးသားလွှတ်တော် တောင်သူလယ်သမားရေးရာနဲ့ ကေ်းလက် နျေပည်သူမ်ား ဖြံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးက္မောတီကို တင်ျပသြားမယ္လို့ သိရပါတယ်။ ဘယ္လိုအခ်က်တြေ ပါဝင္မွာ ပါလဲ။
ျေဖ။ ။ နံပါတ်(၁)ကေတာ့ စိုက္ပ်ိုးခ်ိန္မျွာဖစ်ပေါ်နေတဲ့ အခက်အခဲတြေပါ့။ မ်ိုျးပဿနာတို့၊ျေမသြ ဇာ၊ျေမ၊ျပဿနာတို့ စသည်ျဖင့်ပါ။ နံပါတ်(၂) ကေတာ့ ရရွိလာတဲ့ စေ်းကြက္ကို ဘယ္လိုခိုင္မာအောင် တည် ဆောက္မလဲ၊ ဥပမာ တရုတ်သြားမွာလား၊ အိန္ဒိယသြားမွာလား၊ ထိုင်းသြားမွာကျပည္တငြ်း အစာစက်ရုံလား စသျဖင့်ပေါ့။ နံပါတ်(၃) ကေတျာပည္တငြ်းမွာ ကုန်ခေ်ာထုတ္ဖို့ ကိစ္စေပါ့၊ ကျန်ြတ္တောို့ ဘယ္မွမေရာင်းတော့ ဘူး။ျပည္တငြ်း အစာခ်က္စက်ရုံတြေက ထုတ္လုပ္တာရဲ့ ၅ ရာခိုင္နှုန်းပဲ ရွိသေးတယ်လေ။ျပည္တငြ်းမွာ ၅ ရာခိုင္နှုန်းပျဲဖုန်းနိုင်သေးတာပေါ့။ ၉၅ ရာခိုင္နှုန်းကျပည္ပကို အားကိုးနေရတဲ့ အျေခအေန။ အဲတော့ ကျနြ် တ္တောို့က ၉၅ ကျိုပည္တငြ်းမွာ ကုန်ခေ်ာအျဖစ် ထုတ္လုပ္နိုင္ဖို့၊ တစ်ျခားနိုင်ငံ ရင်းနွီျးမွပ္နွံမှု ဖိတ်ခေါ်မလား ပေါ့။ ဒါတြေကို ကျန်ြတ္တောို့က တင်ျပရုံပါပဲ။ လုပ်ပေးရမွာက အစိုးရတာဝန်ပေါ့။
မေး။ ။ျပည္ပတင္ပို့မှုမွာျေပာင်းကို တရုတ္နိုင်ငံကိုပဲ အားထားတင္ပို့နေရတယ္လို့ သိရတယ်။ တစ်ျခားနိုင်ငံ စေ်းကြက်တြေကို ခ်ဲ့ထြင္နိုင္ဖို့ ဘယ္လိုအခက်အခဲတြေ ရွိနေလဲ။
ျေဖ။ ။ ရာခိုင္နှုန်း ၇၀ ကေ်္ကာ တရုတ်စေ်းကြက် တစ္ခုတည်းကို သြားနေတာ။ တစ်ျခားနိုင်ငံတြေကို သြားလို့တော့ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ စိုက္ပ်ိုးရေး၊ မြေျးမူရေးနဲ့ ဆည်ျေမာင်းဝန်ကြီး ဌာနကေနျေပာင်းနဲ့ ပက်သက္တဲ့ နည်းပညာကို အျပည့်အ၀မေပးတဲ့အတြက်ကြောင့် အရည်အေသြးပိုင်းဆိုင်ရာတြေ၊ျပဿနာရွိနေတာ့ တစ်ျခားနိုင်ငံတြေကို သြားလို့အဆင္မျေပဘူး။ အခုလောလောဆယ္ကေတာ့ျေပာင်းစစိုက္ကတည်းကေန အခုခ်ိန် အထိ မွောင္ခိုစေ်းကြက္နဲ့ တရုတ္ကိုဝင်နေရတယ်။ တရုတ္ကလဲ ဒီမွောင္ခိုစေ်းကြက္ကို ပိတ်သိမ်းမယ္ဆို တော့ ဟိုလြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္လပိုင်းကေနစပြီး၊ ယေန့အခ်ိန္ထိ အဆင္မျေပဘူးပေါ့ဗ်ာ။ အခုဆိုရင် ပိုကြပ္လာ တာပေါ့။ တရုတ်ခေါင်းစဉ္ကတော့ မွောင္ခိုစေ်းကြက် တိုက္ဖ်က်ရေးပေါ့။ အဓိကကေတာ့ တရားဝင်စေ်းကြက် ကို မရရွိသေးဘူး။
မေး။ ။ တရုတ္နိုင်ငံရဲ့ တရားဝင်စေ်းကြက္ကို တင္ပို့ခြင့်ရရွိဖို့အတြက် အဓိကရွိနေတဲ့ အခက်အခဲတြေ က ဘာတျြေဖစ္မလဲ။
ျေဖ။ ။ ဘာကြောင့် တရားဝင်စေ်းကြက် မရရွိသေးလဲဆိုတော့ျေပာင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တရုတ္နဲ့ကျမန် မာနိုင်ငံအစိုးရနဲ့ MOU ထိုးထားတာ မရွိဘူး။ မရွိတဲ့အတြက်ကြောင့် တရားဝင်သြားလို့ မရဘူး။ ဒျီေပာင်းထဲ မွာပါဝင္တဲ့ တရုတ္ဘက္ကေန ကန့်သတ္ခ်င္တဲ့ အခ်က်တြေ ၁၄ ခ်က်လောက်ရွိတယ်။ အဲအခ်က်တြေမွာ ကျန်ြတ္တောို့က တစ္ခ်က္မ မလြတ္ဘူး။ အဲအတြက်ျေဖေလွ်ာ့ပေးဖို့ပဲ အစိုးရကျေပာပေးရမွာပါ။ MOU ထိုး ဖို့ကိုဘာကြောင့်မို့ နောက္တြန့်နေကြတာလဲဆိုတော့ ဒီဘက္က လိုအပ္ခ်က်တြေ ကျန်ြတ္ထောင္တာတော့ျေပာင်းရဲ့မ်ိုးမွာ GMO မ်ိုးစိတ်တြေ ပါနေလို့ တရုတ္က ကန့်သတ္ထားတာ အဓိက အဲဒီအခ်က်ျဖစ္မယ်။ တ ရုတ္က နဂိုကတည်းက တရားဝင်ပေးမထားတော့ ထိန်းခ်ုပ္ခ်င္တာပေါ့။
မေး။ ။ ဒီအခ်က်တြေ တင်ျပတဲ့အခါမွာ ဘယ္လိုပုံစံမ်ိုး တင်ျပသြားမလဲ။ ဘယ်အသင်းအဖြဲ့တြေ ပါမ လဲ။
ျေဖ။ ။ ခုလောလောဆယ် ကျန်ြတ္တောို့ ခ်ိတ္ထားတာကေတာ့ သုံး၊ လေးဖြဲ့လောက် ရွိနေပြီ၊ျမစ်ကြီး နားျေပာင်းစိုက္ပ်ိုးရေး အသင်းတြေ၊ ကျန်ြတ္တောို့ တောင်သူလယ်သမား အေထာက်အကျူပု အဖြဲ့တြေ၊ နောက်ပြီးတော့ မန္တေလး ကုန္စည္ဒိုင္ကလူတြေ၊ ကုန်သည္ပြဲစားတြေကအစ သူဒေသနဲ့ သူ၊ သူအခက်အခဲတြေ ကို တင်ျပကြမယ်။ ကျန်ြတ္တောို့ စကားကို နားထောင်ပြီးတော့ လွှတ်တ္ကောို တင်ျပေပးမယ္ဆိုရင်တော့ အ ဆင်ျေပတာပေါ့ဗ်ာ။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုမ်ိုးတင်ျပဖို့ ကြိုးစားပေါင်းလဲ မနည်းတော့ပါဘူး။ ဒီကိစ္စကို လစ္လ်ူရှုထား တဲ့ အျေခအေနမ်ိုးမွာ ကြုံနေရတာ။ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂ နွစ်လောက္ကတည်းက ကျန်ြတ္တောို့ ကြိုးစားနေတာ။ ဒါပေ မယ့် ဘယ်သူ့ကိျုေပာလို့ျေပာရမွန်း မသျိဖစ်နေတယ်။ ၀န်ကြီးဌာနေတြကလည်းျေပာရင် အရည်အေသြး မ ကောင်းလို့ဆိုပြီး ဘ္လောီဘော ပုတ်နေကြတယ်။
မေး။ ။ တရုတ် အ၀ယ္ကဆက်ပြီး ရပ္ဆိုင်းနေမယ္ဆိုရင် လာမယ့်နွစ်အတြက်ျပည္တငြ်းျေပာင်းစေ်း ကြက် အျေခအေနေတြက ဘယ္လိုတျြေဖစ္လာနိုင္မလဲ။ ဘယ္လိျုေဖရွင်း ဆောင်ရြက်သင့်တယ္လို့ ထင္လဲ။
ျေဖ။ ။ ဘယ္လိျုေဖရွင်းရင် အေကာင်းဆုံျးဖစ္မလဲဆိုတော့ ကျန်ြတော်ျေပာတဲ့ နံပါတ်(၁) အခ်က်ျဖစ် တဲ့ မ်ိုးတြေကို သေခ်ာစီစစ်ရမယ်။ ကန့်သတ်ရမယ်။ မ်ိုးထဲမွာပါဝင္တဲ့ ပိုးတို့ GMO တို့ကို အစိုးရဌာနက သေ ခ်ာစီစစ်သင့်တယ်။ အဲဒီမ်ိုးတြေ ပြီးပြီဆိုရင် မသုံးသင့်တဲ့၊ သုံးသင့်တဲ့ စိုက္ပ်ိုးတဲ့ နည်းပညာ၊ျေမသြဇာ ဒီအရာ တြေကို လမ်းညွှန်ပေးဖို့လိုတယ်။ အဲဒါမွ အရည်အေသြျးပည့်ဝတဲ့ျေပာင်းထြက္လာမွ တစ်ျခားနိုင်ငံတြေကို အ ရည်အေသြး သြားစစ်ဆေးမယ္ဆိုရင် အောင်ျမင္မွ တစ်ျခားနိုင်ငံစေ်းကြက္ကို စဉ်းစားလို့ ရမွာလေ။ ဒါမမဟုတ် ရင်တော့ အခုကျန်ြတ္တောို့က တရုတ္ကေန ပေါခေ်ာင်ကောင်းနဲ့ ၀ယ်ပေးနေတယ်။ အခု ရောင်းနေတဲ့အေန အထားက မွောင္ခိုစေ်းကြက်ျဖစ်နေတဲ့အတြက်ကြောင့်ျေပာင်းရဲ့ အရည်အေသြးကို သေခ်ာစိစစ္တာမ်ိုးတော့ မရွိသေးဘူး။ တရုတ္က စေ်းဖ်က္ထားတျာဖစ္တဲ့အတြက်ျပည္တငြ်းက အစာခ်က္စက်ရုံတြေကလည်း စေ်းနွိမ် ပြီး ၀ယ်နေကြတယ်။ အမွန်တော့ အဲလိုမျဖစ်သင့်ဘူးပေါ့။ျပည္တငြ်းက အစာခ်က် စက်ရုံတြေကလည်း သင့် တင့်တဲ့ စေ်းနှုန်းနဲ့ ၀ယ်ပေးသင့်တာပေါ့။ အခု တရုတ်စေ်းက်တော့ သူတို့ကလည်း လိုက္ခ်ပြီးဝယ္တဲ့ သေဘာ ပေါ့။
ဟုတ္ကဲ့ အခုလိုျေဖကြားပေးတာ ကေ်းဇူးတင္ပါတယ် ရွင့်။
Thanksalot for giving everyone an extremely nice chance to read articles and blog posts from this blog. It is always very cool and full of fun for me personally and my office peers to visit your web site ataminimum three times inaweek to read through the new items you will have. And indeed, I'm actually pleased considering the unbelievable thoughts you serve. Certain4ideas in this article are completely the best we have all had. yeezy boost 350
by ygohez@gmail.com at June 09 2019
I together with my friends happened to be going through the excellent helpful tips from the blog and then instantly I hadahorrible feeling I never thanked the site owner for those tips. All of the men came certainly thrilled to read all of them and already have actually been enjoying those things. Appreciate your genuinely simply considerate and then for makingadecision on variety of amazing information most people are really desirous to discover. Our honest regret for not expressing gratitude to sooner. nike huarache
by yqouaen@gmail.com at June 08 2019
I together with my guys were actually looking at the good tricks on the website while suddenly developed an awful feeling I had not expressed respect to you for those secrets. Most of the guys ended up consequently very interested to read them and now have honestly been having fun with those things. Appreciate your being very kind and also for picking out some incredible areas millions of individuals are really needing to learn about. My very own sincere regret for not expressing appreciation to you earlier. golden goose outlet [url=http://www.goldengoose-sneakers.us]golden goose outlet[/url]
by rcduypfbyy@gmail.com at June 07 2019
I wish to show thanks to the writer just for bailing me out of suchainstance. After surfing around throughout the internet and finding ideas that were not helpful, I was thinking my entire life was over. Living minus the answers to the problems you have sorted out asaresult of your main blog post isacrucial case, and ones that would have adversely damaged my career if I had not discovered your website. Your actual talents and kindness in touching everything was helpful. I am not sure what I would've done if I had not encountered suchasubject like this. I am able to at this moment look ahead to my future. Thanksalot so much for this specialized and result oriented guide. I won't hesitate to propose your web blog to any individual who will need guidelines about this matter. yeezy boost 350 v2
by lxlhvzdfhhl@gmail.com at June 05 2019
I needed to create you the tiny remark to thank you as before for your personal exceptional concepts you've discussed on this site. This has been so wonderfully generous with you to give unhampered all that some people could possibly have advertised for an electronic book to generate some profit for themselves, notably considering the fact that you could have done it in case you wanted. These strategies also acted to beagood way to fully grasp that most people haveasimilar passion like my very own to realizealittle more on the subject of this condition. I am sure there are some more fun times up front for individuals that read carefully your website. cheap jordans
by rgshmbyq@gmail.com at June 04 2019
I actually wanted to write downasmall word in order to express gratitude to you for the amazing solutions you are sharing here. My considerable internet search has at the end been compensated with professional insight to go over with my close friends. I 'd declare that most of us readers are quite blessed to be inafine website with very many lovely professionals with very helpful basics. I feel quite grateful to have discovered your entire web pages and look forward to many more cool minutes reading here. Thanksalot once again for everything. gucci belts
by fztewjlfgj@gmail.com at June 04 2019
My wife and i have been joyous that Edward managed to do his web research out of the ideas he had through your blog. It is now and again perplexing to simply choose to be giving freely secrets which usually the rest could have been making money from. And we see we need you to thank for that. The specific illustrations you made, the easy web site navigation, the relationships you can make it easier to create - it's got mostly exceptional, and it is helping our son in addition to us reason why that situation is exciting, which is certainly seriously mandatory. Many thanks for all the pieces! adidas tubular x
by fgigfxqyye@gmail.com at May 31 2019
I precisely wished to say thanks all over again. I do not know the things that I would've sorted out in the absence of the type of smart ideas shared by you relating to such field. This has beenascary scenario for me personally, but noticing this specialized manner you dealt with that took me to weep with happiness. I will be grateful for the service and then believe you recognize what an amazing job you have been undertaking teaching the rest through your web page. Most likely you haven't met all of us. kd shoes
by ssjgrcncse@gmail.com at May 31 2019
I precisely had to thank you so much once more. I do not know what I could possibly have used without the type of tactics discussed by you regarding this subject. It truly wasavery hard scenario for me personally, but viewing the very expert tactic you treated the issue took me to leap over fulfillment. Extremely grateful for your support and in addition pray you really know whatagreat job you happen to be doing teaching many others usingablog. I am certain you haven't met all of us. jimmy choo shoes
by tixaobny@gmail.com at May 27 2019
I simply wanted to appreciate you all over again. I am not sure the things that I would have gone through in the absence of the methods shared by you on my subject. It seemed to beafearsome difficulty for me, nevertheless looking at the skilled manner you solved that forced me to weep over delight. Now i'm happier for your guidance and then hope you comprehend whatagreat job you have been providing instructing other individuals usingablog. I know that you have never come across all of us. jordan shoes
by ygfzfvu@gmail.com at May 27 2019